Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Kulan balaadhan oo dhexmaray madaxweynaha DDS iyo jaaliyadda UAE
Kulan balaadhan oo dhexmaray madaxweynaha DDS iyo jaaliyadda UAE
October 29, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
XOL:Madaxweynaha Deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo maalmihii ugu danbeysey kusugnaa dalka Imaaraadka Carabta ayaa maalintii Axadda ahayd ee 28ka Bishan Oct kulan wayn la qaatey jaaliyadda DDS ee ku nool waddankaasi. Kulankan oo ahaa midkii ugu horeysey noociisa ayna dad aad ubadan kasoo qaybgaleen ayaa madaxweynuhu warbixin dheer ka bixiyay xaaladda deegaanka iyo guud ahaan hormarka hirgalay ee ay xukuumadda iyo deegaanku gaadheen. Waxaa kale oo shirka kasoo kasoo qaybgalay Safiirka dawladda Ethiopia ufadhiya dalka Imaaraadka Carabta iyo marti sharaf kale oo badan.
Madaxweynaha ayaa u mahadceliyay jaaliyadda DDS ee dalka Imaaraadka Carabta iyo kaalintooda kaga aaddan ee ay ka qaateen hormarka iyo nabadgalyada iyo waliba midda looga fadhiyo ama laga sugayo. Dhanka kale madaxweynaha aaya sharaxaad dheer ka bixiyay arimaha waxbarashada, Caafimaadka, Biyaha,Beeraha,Xoolo-dhaqatada, wadooyinka,Isgaadhsiinta iyo Barnaamijka dibudejinta ee Qoysaska loogu bedelayo Xoolo-dhaqato isla markaana ah beeralay daggan oo aan guurguureynin taasoo usahleysa iney helaan adeegyo waxbarasho iyo caafimaad.
Kadib warbixintii madaxweynaha ayaa waxey qaar ka tirsan ka qaybgalatyaashii shirku ay weydiiyeen su aalo muhiim ahaa iyadoo madaxweynuhuna ka jawaabay.
Dhamaan qurbajoogta Imaaraadka carabta, Ganacsatada, Odoyaasha iyo Gudiga jaaliyada ayaa aad u soo dhaweeyay Waxqabadka muuqda ee Xukuumadu ku talaabsatay, islamarkaana balanqaaday in ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dawladda Deegaanka.